Maxay Ahayd Haddiyaddii Uu Florentino Perez Guddoonsiiyey Zinedine Zidane Kaddib Guushii Eibar - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaMaxay Ahayd Haddiyaddii Uu Florentino Perez Guddoonsiiyey Zinedine Zidane Kaddib Guushii Eibar
Maxay Ahayd Haddiyaddii Uu Florentino Perez Guddoonsiiyey Zinedine Zidane Kaddib Guushii Eibar
April 4, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka La Liga 0
Habeen farxadeed ayay u ahayd tababare Zinedine Zidane, waxaana isku raacay guul weyn oo ay kooxdiisu ka gaadhay Eibar oo ay ugu dhowaatay Atletico Madrid, sidoo kalena kaalinta labaad kagala baxday Barcelona iyo midda labaad oo ahayd in ay u buuxsantay 250 ciyaarood oo uu tababare u ahaa Real Madrid.
Tababare Zinedine Zidane ayaa markii ay ciyaartu soo dhamaatay, waxa uu hadiyad ka helay madaxweyne Florentino Perez oo qolka lebbiska ku guddoonsiiyey garanka kooxda oo ay dhabarka kaga qoran tahay 250 oo ah tirada kulamadii uu soo layliyey kooxda.
Perez ayaa isagana ay u ahayd habeen taariikhi ah, waxaana u buuxsamay kulankii 1,000aad ee uu Madaxweyne ka yahay Real Madrid.
Real Madrid ayaan laga badinin 11kii ciyaarood ee ugu dambeeyey, waxaanay taasi ka caawisay in ay saddex dhibcood waqtigan ka dambeeyaan Atletico oo hoggaanka haysa.
Zinedine Zidane oo ciyaarta kaddib la hadlay warbaahinta ayaa yidhi: “Waxaanu ognahay halka aanu ka nimid, sidaa darteedna waan faraxsanahay.”
Maxaa ugu suntan 250ka ciyaarood ee uu Zidane tababaraha u ahaa Real Madrid?
Muddada 250ka ciyaarood ah ee uu Zinedine Zidane soo maamulay Real Madrid waxay u qaybsan yihiin laba xilli oo ay u dhaxaysay waqti sannad ah.
Laba sannadood iyo badh oo guulo waaweyni ku suntanaayeen ayuu Zidane go’aansaday in uu ka tago, waxaana xilkiisa la wareegay Julen Lopetegui oo uu sii beddelay Santiago Solari, waxaana labadooda oo waqti kooban ku fashilmay ay dhaafeen kooxda, iyadoo uu Zidane dib ugu soo laabtay.
250kaas ciyaarood, waxa uu Zidane u qaaday Real Madrid: Saddex Champions League oo isku xiga, Laba Club World Cup, Laba Euroean Super Cup, Laba jeer oo horyaalka LaLiga ah iyo laba koob oo Spanish Super Cup ah.
165 ka mid ah 250kaas ciyaarood ayuu Zidane guuleystay, waxaana uu hadda yahay tababaraha labaad ee ugu waqtiga dheer Real Madrid, iyadoo kaliya uu ka horreeyo Miguel Munoz oo 605 ciyaaarood tababare u ahaa Real Madrid.